सङ्खुवासभाको घटनामा नयाँ खुलासा : कस्लाई बचाउँन झुट बोले लोकबहादुर ? – Kavrepati
Home / समाचार / सङ्खुवासभाको घटनामा नयाँ खुलासा : कस्लाई बचाउँन झुट बोले लोकबहादुर ?
admin September 20, 2021	समाचार Leaveacomment 139 Views
सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोला गाउँमा छ जनाको घट्नामा सं’लग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्कीसहित अन्य चार जनालाई अनुसन्धानमा ता’निएको छ । एकै परिवारका छ जनाको घट्ना भएको सो घटनामा सं’लग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि चार जनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए । घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत सं’लग्नता भएको आ’शङकामा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनका अनुसार सो घटनामा सं’लग्न रहेको आरोपमा स्थानीयवासी लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । नियन्त्रणमा लिएको अन्य चार जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक राईले बताए । मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल केन्द्रमा पुगेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ ।
भदौ २६ गते लोकबहादुरले घटनामा आफ्नो सं’लग्नता स्वीकार गरेसँगै प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । घटनाको दिनदेखि हराइरहेको रञ्जनाको मोबाइल फोन भदौ २९ गते अन भएपछि प्रहरीले लोकबहादुरका भाइ नरेश कार्कीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नरेशले भने उक्त मोबाइल घरमै भेटाएर चलाएको बयान दिएका छन् । घटनामा नरेशको सं’लग्नताबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन ।
घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि सङ्घीय एकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालयका प्रहरीसहित छ जनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।
रञ्जना र कमलाको घाँ’ ‘टी लगायतका भागमा ‘ह’ति’या’र’ प्रयोग गरेको पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि प्रहरीले यतिबेला त्यही खोजी गरिरहेको छ । लोकबहादुरले चि’र्प’ट’को मात्रै प्रयोग गरेको बताइरहँदा उनीहरूमाथि ह’ति’या’र प्रयोग गर्ने को थियो भन्नेबारे प्रहरीलाई नयाँ चु’नौती थपिएको छ ।
सङ्खुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदीले रञ्जना र कमलाको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ह’ति’या’रको प्रयोग भएकोसमेत रिपोर्ट आएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । सुवेदीले भने, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ह’ति’या’रको प्रयोग भएको उल्लेख छ । तर लोकबहादुरले ह’ति’या’रको प्रयोग नभएको बताएका छन् ।
यसकारण हामीले पनि घटनामा लोकबहादुर मात्रै नभएर अन्य व्यक्तिको पनि सं’ल’ग्नता छ कि भनेर त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।
गत भदौ २१ गते बिहान उम्लिङ खोला गाउँका ५२ वर्षीय तेजबहादुर, उहाँकी ८४ वर्षीया आमा पार्वती, ५२ वर्षीया श्रीमती कमला, बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना, नाति ११ वर्षीय दीपेन र नातिनी सात वर्षीया गोमाको ह’ ‘त्या भएको थियो । लोकबहादुरले छ जनाको ह’ ‘त्या गरेको बताइएको छ ।
लोकबहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । घट्नामा सं’लग्न भएको आ’रो’पमा पक्राउ परेका लोकबहादुर र नरेशको बयानका आधारमा अन्य चार जना माथिसमेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेका प्रवक्ता राईले बताउनुभयो ।
सङ्खुवासभा प्रहरीले घटनाको सातौँ दिनपछि अभियुक्त लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो । रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानदेखि नै हराएको थियो । सो मोबाइल लोकबहादुरको घरमा फेला पारेको थियो ।
Previous बिहे कहिले गर्ने भनेर पत्रकारले सोधेपछि अनमोलले दिएको जवाफले सबै चकित
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ४ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल